.” ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းကို သူ့မအိမ်ထိ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပို့ဆောင်ပေးသွားတဲ့ ညီနန္ဒကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်”. – Askstyle
.” ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းကို သူ့မအိမ်ထိ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပို့ဆောင်ပေးသွားတဲ့ ညီနန္ဒကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်”.
ေမျမင့္မိုရ္ကေတာ့ “ပန္းႏုေသြး”ဇာတ္လမ္းတြဲကေန ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးဝန္းရံမႈကို ရရွိလာတဲ့ မင္းသမီးတစ္လက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာဆိုရင္ ဇာတ္လမ္းတြဲတိုင္းရဲ႕ က်ရာဇာတ္ရုပ္ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ သရုပ္ေဆာင္နုိင္မႈေတြေၾကာင့္ အႏုပညာေလာကမွာ ေနရာတစ္ေနရာစာအျဖစ္ေအာင္ျမင္ေနတာပါပဲေနာ္။သူမရဲ႕ တည္ျငိမ္စြာ ေနထုိင္တတ္မႈေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ကို အခိုင္အမာရရွိထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေမျမင့္မိုရ္ကေတာ့ လတ္တေလာမွာ ဇာတ္လမ္းတြဲရုိက္ကူးမႈေတြ ရုိက္ကူးေနရတာေတြကို ေတြ႕ရမွာပါပဲေနာ္။ သူမဟာဆိုရင္ အမွတ္တရပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႕ ဗီဒီယုိဖုိင္ေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာေပၚမွာ တင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေန႕မွာေတာ့ ေမျမင့္မိုရ္က”ကိုညီနႏၵရဲ႕ ေထာပတ္ထမင္း ရွယ္ပဲစားလို႔အရမ္းေကာင္း အိမ္ထိကိုယ္တိုင္လာပို႔ေပးလို႔ေက်းဇူးမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင့္ ကိုနႏၵ ေထာပတ္ထမင္း”လို႕ဆိုျပီး အိမ္ထိလာေရာက္ပို႕ေပးသြားတဲ့ စီနီယာျဖစ္သူ ညီနႏၵကို ေက်းဇူးတင္စကားဆိုလာတာေလးကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ေပးလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေမျမင့္မိုရ္ရဲ႕ ေက်းဇူးတင္စကားဆိုလိုက္တာေလးကို ပရိသတ္ေတြအတါက္ ျပန္လည္ျပီးမွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြအားလုံးသာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေန႕ရက္ေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႕ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Source…May Myint Mo’s Facebook
” ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းကို သူ့မအိမ်ထိ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပို့ဆောင်ပေးသွားတဲ့ ညီနန္ဒကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်”
မေမြင့်မိုရ်ကတော့ “ပန်းနုသွေး”ဇာတ်လမ်းတွဲကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို ရရှိလာတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာဆိုရင် ဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်းရဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့် အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာစာအဖြစ်အောင်မြင်နေတာပါပဲနော်။သူမရဲ့ တည်ငြိမ်စွာ နေထိုင်တတ်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို အခိုင်အမာရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မေမြင့်မိုရ်ကတော့ လတ်တလောမှာ ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးမှုတွေ ရိုက်ကူးနေရတာတွေကို တွေ့ရမှာပါပဲနော်။ သူမဟာဆိုရင် အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မေမြင့်မိုရ်က”ကိုညီနန္ဒရဲ့ ထောပတ်ထမင်း ရှယ်ပဲစားလို့အရမ်းကောင်း အိမ်ထိကိုယ်တိုင်လာပို့ပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့် ကိုနန္ဒ ထောပတ်ထမင်း”လို့ဆိုပြီး အိမ်ထိလာရောက်ပို့ပေးသွားတဲ့ စီနီယာဖြစ်သူ ညီနန္ဒကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလာတာလေးကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တာလေးကို ပရိသတ်တွေအတါက် ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။